I-Villa ene-Roof Top Plunge Pool kanye ne-Sky Garden - I-Airbnb
I-Villa ene-Roof Top Plunge Pool kanye ne-Sky Garden
Ampitiya, Central Province, i-Sri Lanka
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Champ
U-Champ Ungumbungazi ovelele
Isendaweni ephithizelayo kude nenkaba yedolobha, i-villa enekamelo elilodwa elinokuthula elinechibi lokubhukuda elizungezwe ingadi yasezindaweni ezishisayo. Itholakala kuphela kumakhilomitha ayi-1.5 ukusuka enkabeni yedolobha. Gxila echibini lakho langasese lokucwila, funda izincwadi zakho zeholide kuthala eliphezulu noma engadini engezansi. Kuhlinzekiwe isidlo sasekuseni esinesizotha.
I-chateau enokuthula efana ne-villa yokulala eyodwa ene-balcony ebheke ingadi ekhazimulayo yasezindaweni ezishisayo. Ifulethi elizimele elinekhishi lakho elihlinzeka ngezinsiza zokwenza itiye nekhofi. Ifriji encane kanye ne-microwave nakho lapho kufanele uyidinga. Kodwa-ke uma udinga noma yini singamakhelwane kuphela, vele usimemeze. Sijabule kakhulu ukusiza nganoma yisiphi isikhathi.
4.88 · 226 okushiwo abanye
Itholakala endaweni engaphansi kwamamayela ayi-1.5 ukusuka enkabeni yedolobha, kude nesiphithiphithi nedolobha. Jabulela ubumfihlo bakho nokuthula kule ingadi eshisayo ezungezwe. Ngokungafani nenkaba yedolobha ungabona futhi uzwe ukuthi impilo yangempela yasendaweni injani. Isitolo sebhikawozi esihle lapho uma uthanda ukudla okulula ntambama.
Siyabuhlonipha ubumfihlo babantu, kodwa siphinde sikujabulele kakhulu ukuxoxa nawe mayelana nezindawo ezikhangayo nezikhombisi-ndlela eziya ezindaweni ezidumile zezivakashi. Ubaba uhlala ewusizo kakhulu ukuhlela uhambo losuku oluya ekhaya lezintandane le-Pinnawala Elephant nase-Sigiriya nase-Dambulla rock temple.
Sicela futhi ukhulume naye mayelana nesidingo sakho sasekuseni kanye nesikhathi ongathanda ukusithola.
Siyabuhlonipha ubumfihlo babantu, kodwa siphinde sikujabulele kakhulu ukuxoxa nawe mayelana nezindawo ezikhangayo nezikhombisi-ndlela eziya ezindaweni ezidumile zezivakashi. Ubaba…
UChamp Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Ampitiya namaphethelo